Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Safarka Ganacsiga » Isku -darka safarka iyo shaqada fog -fog waa isbeddel sii kordhaya
Safarka Dalxiiska • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
TUI waxay u jeesanaysaa suuqyo kale sida isbeddelka sii kordhaya ee socdaalka la isku daray iyo waayo -aragnimada shaqada fog maadaama ay bilawday xirmo cusub 'shaqo'.
Sababtoo ah COVID-19 masiibada adduunka ee ka shaqeynta guriga ayaa hadda ah dhaqan caadi u ah dad badan.
Shaqaaluhu waxay ku kici karaan caannimo maadaama dabacsanaan badan oo shaqo la soo bandhigo iyadoo ummaddu dib ugu laabanayso xafiiska.
Gelitaanka hore ee TUI ee suuqa shaqada waxay arki kartaa inay noqoto hoggaamiye suuqa hore.
Iyada oo baahida safarka la filayo inay si tartiib tartiib ah ugu soo noqoto, TUI waxay u jeesanaysaa suuqyo kale sida isbeddelka sii kordhaya ee socdaalka iyo waayo -aragnimada shaqada fog maadaama ay bilawday xirmo cusub 'shaqo' si ay u noqoto bixiyaha ugu horreeya ee adeeggan safarka cusub.
Sababtoo ah masiibada ka shaqeynta guriga ayaa hadda ah dhaqan caadi u ah dad badan oo shaqooyinku waxay caan u noqon karaan maaddaama dabacsanaan shaqo oo badan la soo bandhigo iyada oo qaranku dib ugu laabto xafiiska.
TUI waxay aqoonsatay isbeddelkan sii kordhaya goor hore waxayna naqshadeysay xirmadooda iyada oo maanka lagu hayo waxyaabaha daruuriga ah ee fog oo ay ku jiraan Wi-Fi iyo goob shaqo oo u go'an 30 ka mid ah hoteellada caalamka. Shaqada fog waxay u noqon kartaa udub dhexaad dad badan, iyo gelitaanka hore ee TUI ee suuqa shaqada waxay arki kartaa inay noqoto hoggaamiye suuqa hore.
Ra'yi ururin dhowaan la sameeyay ayaa muujisay doorbidaad aad u yar booqashooyinka xafiiska kadib COVID-19 iyadoo 29% jawaabeyaasha caalamiga ah ay rabaan inay booqdaan xafiiska bil kasta, saddexdii biloodba mar, ama marka maamulka codsado. Mid kale oo ka mid ah shantii (21%) marna ma doonayo inuu xafiiska booqdo mar dambe.
Beddelka shaqada fog iyo doorbididda dadyowga si ay u booqdaan xafiiska ayaa si aan badnayn u muujineysa fursad wanaagsan oo suuqa ah TUIbaakadaha shaqada. Faafida COVID-19 waxay ku qasabtay inay ka shaqeeyaan inta badan shaqaalaha xafiiska, iyo beddelkooda dareenka waxay muujinayaan rabitaan ah in la sii wado qabanqaabada hadda. Kuwo badan ayaa quusan doona inay baxsadaan, isbadalka muuqaalka ayaa bixin kara kor u qaadis wax soo saar.
Ra'yi ururin toos ah oo dheeri ah ayaa lagu ogaaday in 45% jawaabeyaasha ay sheegeen in fursadaha wanaagsan ee diiradda la saarayo ay sabab u tahay sii wadista shaqada fog. Ka baxsashada shaqada waxay bixin doontaa waayo-aragnimo shaqo oo fog fog oo ka fog waxyaabaha carqaladeeya guriga oo ay ku jiraan cuntada oo dhan loo dhan yahay, shaqaaluhu waxay xoogga saari karaan shaqada iyada oo aan la saarin culayska hawlaha maalinlaha ah.
TUI waa hawlwadeenkii dalxiiska ee ugu horreeyey ee bixiya xirmooyin gaar ah oo loogu talagalay shaqaalaha fog. In kasta oo kooxaha hudheelada qaarkood ay bixiyeen baakado la mid ah TUI, badankoodu waxay kaliya bixiyeen adeegsiga maalin qol. Hawlwadeenka dalxiiska ayaa isku daray shuruudaha shaqada fog ee lagama maarmaanka ah iyo joogitaanka nasashada ee hoteeladiisa.
Iyada oo baahida safarka la filayo inay qaadato waqti dib -u -soo -kabasho ah, oo lagu beegsanayo baahida sii kordheysa ee shaqada fog -fog iyadoo la siinayo baakadaha shaqada ayaa bixin kara TUI oo ay taageeraan ku soo laabashada dhaqsaha leh ee heerarka dakhli ee ka horeeya COVID ee hawlwadeenka dalxiiska.